7 Waxyaabood Oo Keena In Dubku Qalalo (Dry Skin) - Daryeel Magazine
7 Waxyaabood Oo Keena In Dubku Qalalo (Dry Skin)
Cosmetics: Haddii ay jirto xaalad xasaasiyed oo ka timid waxyaabah cosmetics ka ee la isticmaalo ama waxyaabaha guriga loo isticmaalo way keeni karaan in uu qofku xasaasiyed qaado oo uu jidhku qalalo. Marka uu qofku uu kolba sii waynaanayona isbadalo badan ayaa ku iman kari maqaarka iyo jidhkaba. Waxaba dhici karta in aad xasaasiyed aad ku yeelatid wax aanad horay xasaasiyad uugu lahayn. Waxaa kale oo dhici kara in xitaa uu qofku ku yeesho xasaasiyed waxyaabo hore uusan u isticmaalin. Kuwaas oo noqon kara waxayaabaha cosmetics, waxyaabah wax lagu dhaqo,saabuunaha iwm. La soco marka uu jidhku dhidhsan yahay ama midabkiisu isbadalayo. Islamarkaana raadi meesha ay ciladu ka timid ama wax yaabaha aad isticmaashay.
Haddii uu yahay jidhakaagu mid aad u qalalan, isku day inaad isticmaashid alaabaha organic ama dabeeciga ah ee waliba bilaa cadar iyo bilaa permufes ka ah, waxaa laga yaabaa in ay ku caawiso.
Isbadalada ay cimiladu u keento jidhka:
Haddii aad dagan tahay, ama imikaba u soo guuray meel ay cimiladeedu tahay mid qalalan, waxa uu u baahanayaa jidhkaagu qoyaan saa´id ah. Marka laga soo baxo cimli oo laga cimilo kale kali ayaaba ukeeni kara maqaarka isbadal. Haddii aad tahay qof maqaarkiisu yahay sansitiv waaba ka sii xag jiraa. Tusaale ahaan marka uu qabowgu badan yahay ama winter ku jiro oo waliba hawo qaboobina socoto waxa ay kaa qaadanaysaa hawado qoyaanka jidhka. Waxa haboon in aad markaa isticmaashid cream culus oo kusiin kara qoyaan badan, adigoo markaana iska ilaalilanaya cream yada ay walxaha khatarta ahi ku badan yihiin ama ku jiraanba.
Isticmaalka cream yada ama anti-age cream:
Haddii aad isticmaashid cream ama saabuuno khaldan khaasatan kuwa ka hortaaga dada waxa ay keeni karaan in ay cilid ku timaado maqaarka. Waxaa haboon inaad baratid habka wanaagsan ee maqaarka loo nadiifiyo, adigoo markaana isticmaalaya waxyaabo naturels ah oon wax sun ama dhibaato ah lahayn. Waanad isticmaali kartaa cream ama scrub loogu tala gala maqaarka, balse iska hubi waxyaabaha kujira. Haddii aad isticmaalaysidna waxyaabaha anti-age am aka hortaga dada iska hubi inay ku jiraan (retinol) waa walax jidhka qalayl ku ridi karta.
Maraka uu qofku waynaado oo kolba da ku biirto waxaa ku ibaada maqaarka isbadal aad u wayn. Wuxuuna jidhku waayaa subagiisa dabeeciga ah ee uu Allah ku abuuray. Markaa waxa uu jidhku u baahan yahay in la qooyo oo loogu dadaalo in la ilaaliyo inuusan dhamaanin subaga dabeeciga ah. InshaAllah waxaan soo diyaarin doona vedios ku tusaya sida loo ilaalin karo maqaarka.
Si khaldan oo maqaarka loo nadiifiyo:
Haddii aad si khaldan u nadiifisid waxa ay keeni kartaa maqaarka oo is badala. Waxaa haboon inaad baratid habka wacan ee loo nadiifinayo maqaarka. Isticmaal mar walba body scrub waliba adigoo samaysanay home made body scrub. InshaAllah ka baro vedio imandoona. Haddii kalan isticmaal product yada jidhka naaciimka u aha ee wax yeeladoodu yartahay. Haddii aad isticmaashid saabunaha caadiga ah ama sida saabun cadarta iwm waxa ay jidhka ka qaadanayaan subaga dabeeciga ah, markaana kuu gaysanaya qalayl.
Cabitaan yar iyo nafaqa daro:
Haddii ay kugu yaryihiin cabitaanka la cabo, khaasatan biya cad waxa ay kugu keeni karaan in uu dubku ku qalalo. Jidhku waxa uu u baahan yahay biyo badan. Biyohu waxa ay sifeeyaan jidhka iyo waliba qoyaan badan seeyaan unugyada kala duwan. Waxa uu qofku u baahan yahay ilaa 2 liter oo biyo ah maalin walba. Mida kale ee kuu soo raaci karta biyo la´aanta oo jidhkaaga qalaly ku keeni karo waxaa ka mid ah nafaqo daro. Adigoo markaa aanan cunin nafaqo isku dheeli tiran, khaasatan khudaarta, kaluunka, caanaha, digiraha, beedka, hilibka wanaagsan, vitamins, omega-3 omega-6 iyo omega- 9. Waxa aytaasina keeni kartaa inuu dubku qalalo oo cunada aad cunaysaa ay saamayso. Ku dadaal in aad markaa jidhkaaga aad dheeli tirtid.
Jidhka sensitive ka ah:
Ha iska dhago tirin jidhka sensitive ka ah, ee wax ka qabo si dagdag ah. Hana isku tijaabin wax walba waayo jidhkan ciladihiisa ayaa badan oo wax badana ma xamili karo. Waxaa jira products jidhkan noocan ah loogu tala galay oo wacan. La tasho Skin doctor ama qof khibrad u leh. Waxii xamaasad ku kicin kara jidhka sensitive ka ahna ku dadaal inaad ka dheeraatid.
La soco maaqaalada kale ee aad ka baran kartid sida loo daryeelo jidhka iyo maqaarkaba.
Sababaha Keena Fin Doobka Iyo 8 Talo Oo Muhiim U Ah Qofka Uu Kasoo Baxo